(Emelitere ikpeazụ On: 06/08/2021)
ebe ọ bụ na 1929 na Vatican nwere kemgbe ihe nọọrọ onwe ha ala na ndị kasị nta na onye na ụwa. ka, na mgbe ebelatawo ebube ya, ịma mma, na ya tremendously egwu na omenala na akụkọ ihe mere eme pụtara. Ọ bụ ezie na onwere n'ime naanị 0.44 square kilomita, Vatican nwere ọtụtụ ebe nkiri ka ọ nọrọ njem nleta ọrụ n'aka: si St. Peter nnukwu ụlọ ụka Senti na Sistine banye n'Ụlọ Ekpere (na ihe ọ bụla ọzọ dị n'etiti), ị ga-n'anya ọ bụla nke abụọ nọrọ Vatican.
Dị ka Ileta na Vatican City via okporo ígwè na-aga, e nwere otu oge a electric ụgbọ okporo maka niile Vatican enthusiasts. Traingbọ oloko ahụ na-ejikọ Vatican City n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ya na Pontifical Villas.
St. Peter’s Basilica bụ onye a kacha mara amara mgbe ị na-eleta Vatican
The ebube St. Peter nnukwu ụlọ ụka Senti bụ centerpiece nke Vatican, wuru na ihe a na-eche na-ebe St. Ebe e liri Pita.
Museo Pio Clementino mgbe ọ na-eleta Vatican
Vatican Museums na-egosipụta usoro nhazi ngosi nke Popes Clement XIV na Pius VI haziri 1769 ka 1799. ndị a veranda ndị a na-edebe akụ trove nke ịrịba iberibe na ọ pụta ìhè dị nnọọ ole na ole bụ nnọọ ike! Onye ọ bụla nwere ihe pụrụ iche na-enye:
Pope n'oge okpomọkụ obibi, The Pontifical Villas – Barberini Gardens kemgbe na-emeghe ka ọha na eze ebe ọ bụ na March 2014. The n'ọnụ ụzọ bụ ụdị siri ike ịhụ ka ọ na-adịghị signposted. Ugbo nke ebube a gafere 2000 afọ, springing atọ etoju. Ha bụ pụtara na ọma setịpụrụ, na ikpeazụ larịị na-egosi na akàrà nke dị iche iche poopu boxed na hedges.
Iji na-enwe njem gị mgbe Ileta Vatican City via okporo ígwè, Chọọ mmalite gị ma bulie Rome Zọpụta a Train website ka akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi n'ime nkeji na-amalite gị Vatican obi ụtọ mee elu mee ka ị ga-atụ anya!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fvisiting-vatican-rail%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)